iPhone Call Log shawladda - Sidee Macdan iPhone Call Taariikhda
> Resource > iPhone > Sidee Macdan iPhone Call Taariikhda
Sidee ayaan u soo saaro karo taariikhda wac iPhone?
Midkiinna ma yaqaan oo file in gurmad iPhone folder ayaan isticmaali karaa in la furo ee SQLlite una yeedha dhoofinta taariikhda ka iPhone?
SQLite, waa file raad raac ah oo aaladaha Apple ee ay Lugood ah. Marka aad synced aad iDevice la Lugood, file gurmad waxaa loo toos ah ahbaa doonaa on your computer, oo joogto ah mar kasta oo aad u hagaagsan ka dib. Waa arrin hab fiican oo kaa caawinaya in aad badbaadin xogta aad hore, laakiin waa seef laba af leh - aadan heli karaa file gurmad ama saaro wax ka.
Sidaa darteed, si ay u soo saaro Guda aad tirtiray call ka iPhone, waxaad u baahan tahay inay soo saaro file SQLite ugu horeysay, iyo Macdan file SQLite, waxaad u baahan tahay shawladda xogta iPhone ah. Haddii aadan weli ma cadda waxa ku saabsan, oo aan soo jeediyo waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows), barnaamij lagu kalsoonaan karo oo dareen leh in aad awood u Macdan log call ka iPhone, oo ay ku jiraan iPhone log call soo socda, log wac xilka iyo log wac seegay. Waxaad iyaga oo dhan Macdan karaa in file HTML on your computer ah, si aad u akhriyi kartaa oo iyaga si fudud daabacan.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone ee macruufka sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan taariikhda call ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS, ka sokow saarida kaga imaanayo Lugood.
Download version maxkamad free of this shawladda log iPhone wac hoose oo u isku day for free on your computer.
Aan hubi sida loo soo saaro taariikhda wac iPhone la version Windows ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka si faahfaahsan. Users Mac samayn karaa talaabooyin la mid ah la version Mac ah.
Tallaabada 1. Ka bilow Macdan taariikhda call ka iPhone
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka, double click si uu u bilaabi on your computer. Guji "kabsado Lugood ee kaabta File", oo waxaad heli doontaa interface ah sida soo socota. Halkan dhammaan faylasha gurmad qalabka macruufka loo qoran doonaa. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro oo guji "Start Scan" si ay ugu guuraan.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha iyo badbaadin taariikhda wac iPhone
Waxaad tahay tallaabo la soo dhaafay hadda. Dooro "Call History" ka mid ah waxyaabaha ku saabsan ka tagay sawirka kadib, oo aad ku eegaan karo oo dhan wacay, xilka iyo seegay aad iPhone. Calaameeyey oo ka dhacay on the "Ladnaansho" badhanka si ay u dhan badbaadin on your computer ka mid ah.
Ugu dambeyntii, waxaad ka akhrisan kartaa oo aad daabacan taariikhda wac aad on your computer hadda. Intaa waxaa dheer, aad sahlay in ay ku eegaan ceshan photos, xiriirada, fariimaha, qoraalada iyo Calendar arrintan iPhone shawladda wac log sida aad jeceshahay.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ayaa sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan taariikhda call ka iPhone 5 / 4s / 4 / 3GS, ka sokow ka gurmad Lugood.